कसरी हटाउने धेरै सोच्ने बानी ? जान्नुहाेस् – Nilo Aakash
निलो आकाश संवाददाता ५ श्रावण २०७७, सोमबार १९:०४
गल्ती कसले गर्दैन ? जानेर पो गर्नहुँदैन । नजानेर हुने गल्तीका लागि धेरै मान्छे पछुताउछन् । तर, यो गलत बानी हो । एकचोटी भएको गल्तीलाई सम्झिरहँदा दिमाग क्षय हुन्छ । त्यसैले गल्ती नदोहोर्याउने बिचार लिएर भएको गल्तीमा नअल्झिने सोच बनाउनुपर्छ ।
धेरै मान्छेले जिन्दगीमा दोहोर्याउने गल्ती हो यो, अरुले ‘राम्रो’ भन्दा मख्ख पर्ने र ‘नराम्रो’ भनेपछि खिस्रिक्क हुने । यही गल्तीले मान्छेलाई पछारिरहेको हुन्छ । सधैँ अरुले हौसला प्रदान गर्देनन् र सबै आफ्ना अनुकल हुँदैनन् । अरुले खराब भनिदिँदा खराब महशुस गर्ने बानी त्याग्यो भने दिमाग बलियो बन्दै जान्छ ।
यसकाे बारेमा पनी जान्नुहाेस् !